Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jarrod Bowen Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Jarrod Bowen na-agwa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Mbido mbu, ndi nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ha bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Ọ bụ nkọwa dị mkpirikpi nke njem ya site na mgbe ọ gachara mgbe ọ ga - aga nke ọma.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ihe ncheta, nke a bụ ihe ngosi ihe ngosi na-egosi na ọ bụ nwata ịbụ onye a ma ama - nchịkọta doro anya nke Jarrod Bowen's Bio.
Akụkọ banyere Jarrod Bowen.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọrụ aka dịka Jud Bellingham, onye jiworo nguzozi ya mee ihe na-eto eto na ọrụ West Ham.
N'agbanyeghị otuto, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole na-agụ akụkọ ndụ Bowen. Anyị nwere ihe niile akwadoro gị, ma na-enweghị n'ihu ado, ka anyị bido.
Jarrod Bowen Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Bocross". A mụrụ Jarrod Bowen na 20th ụbọchị nke December 1996 na nna ya, Sam na obere nne a ma ama na obodo Leominster na Herefordshire, England.
Ndị ọkachamara n'asụsụ Bekee bụ otu n'ime ụmụ atọ (ụmụ nwoke abụọ na nwa nwanyị) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya - ọ dị ka nna na nna mara mma.
Zute nne na nna Jarrod Bowen.
Nwa Sam Bowen tolitere na Leominster, nke dị naanị 12 kilomita site na Hereford. Little Jarrod dị naanị afọ atọ mgbe ọ malitere ịgba bọl.
N'oge ahụ, a na-eji ya ele football na TV wee gaa n'ubi ezinụlọ ya iji mụta ụfọdụ aghụghọ. Eziokwu bụ, ndụ Jarrod site na mbido bụ bọọlụ ma ọ bụ ihe efu.
Hụla foto a ebe ọ nọ n’ubi ezinụlọ ya?
Jarrod Bowen Ezigbo Ezinụlọ:
Enwere ihe ole na ole enwere ike ịjụ ajụjụ ọnụ. Otu n'ime ihe ndị a bụ na ọ nwere oge dị mma n'oge ọ bụ nwata.
Agbanyeghị, ezinụlọ ya nwere rugby karịa bọọlụ na nne na nna ya enweghị ikike na ịhapụ ya ka ọ gbaa bọọlụ.
Obi uto ya na inye ya ihe kachasị mma nke ịzụlite ụlọ bụ ihe niile Sam na nwunye ya lekọtara.
Ezigbo ezinụlọ ezinụlọ Jarrod Bowen:
You ma na obodo onye mụrụ Leominster dị nso na Wales? Nke na-adọrọ mmasị karị, nne na nna ya kpọrọ ya aha Bowen, nke bụ Welsh.
N'agbanyeghị njikọ Cymru, mgbọrọgwụ ezinụlọ Jarrod Bowen bụ Bekee n'ogologo.
Maapụ na-egosi ọnọdụ obodo ọmụmụ Jarrod Bowen.
Jarrod Bowen Football Akụkọ:
Ka ọ na-erule oge onye na-anụ ọkụ bọọlụ mgbe ahụ bụ 10 afọ, e debara aha ya na Hereford United dị ka nwa akwụkwọ.
En Ndenye aha ahụ bịara mgbe ọ nwụsịrị ule na Aston Villa. Klọb ahụ enweghị okwukwe na ya - ma eleghị anya n'ihi Jarrod na ugogbe anya ya adịghị ka ndị ịgba bọọlụ nke ụdị ha.
A Jarrod Bowen nwere obi ụtọ mgbe a jụrụ Aston Villa.
Akụkọ banyere Earlyzọ mmalite:
N'oge elu nke ọrụ ya na Hereford United, klọb hapụrụ ya ọzọ. Ntọhapụ ahụ enweghị ihe ọ bụla metụtara arụmọrụ Bowen mana enweghị nchịkwa n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Ya mere, Bowen gara Cardiff City maka ule, mmepe nke wetaara ezinụlọ ya nsogbu ọzọ. Eziokwu bụ na ọ tara ahụhụ ọzọ. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe ahụ, ọ kwuru otu oge;
“Papa m kpọrọ oku m jụrụ m na ọ bụ Cardiff City mere ka m bee akwa. Amaghị m ihe ga-eme m n'ọdịnihu.
Adịghị m mma n'ụlọ akwụkwọ dịka ihe niile m tụrụ anya ya bụ ịbụ ndị ịgba bọọlụ. ”
Jarrod Bowen Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ dabara nke ọma maka Bocross, Hereford nwetara Malitegharịa ekwentị, ha wee na-arịọ maka ọrụ ya - ihe ngosi nke wetaara ezinụlọ ya ọ joyụ.
Jarrod kpebisiri ike ịbanye n'ime ìgwè mbụ nke Bulls na 2014, na-enyere ha aka izere ịdapụ na ọbụna nweta nsọpụrụ ọ bụla.
Hụ ihe onye egwu ahụ yiri ka ọ na-ebili site na ọkwa nke Hereford.
Agbanyeghị, klọb ahụ mechara daa na nsogbu ego ọzọ nke dugara na nchụpụ ya na football. Kechioma maka Bowen, ọ bụbu ọkachamara, mmepe nke mere ka ọ banye na Hull City na 2014 enweghị ntụpọ.
Ọ bụ na Yorkshire nke dabeere na Bowen guzobere onwe ya dị ka ọganihu. Ọ gwụchara ike site na klọb site na ịmalite EFL Championship Player nke ọnwa na Disemba 2018. Ndị egwu Player of the Year na Hull City Supporter's Player of the Year na Mee 2019.
Hụ onye na-enweta onyinye niile n'ọsọ mmeri.
Jarrod Bowen Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'oge West Ham bịara ịchọ mbinye aka ya na Jenụwarị 2020, enwere otu ajụjụ na egbugbere ọnụ onye ọ bụla.
Ọ ga-anagide David Moyesụdị bọọlụ? Egwu nke ịlaghachi azụ dị n'oge ahụ, onye njikwa ahụ chọkwara ka ndị na-eti ya ihe bụrụ ụzọ izizi mbụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọtụtụ enweghị okwukwe na ikike ịga n'ihu na-eme mgbanwe.
Nke a na-ajụ ajụjụ, Olee otu West Ham's Jarrod Bowen si gbanwee na usoro David Moyes? Onye egwu bọọlụ na-enwe ụdị ọkpụkpọ efu na mmeri.
Otú ọ dị, ọ hụrụ na a manyere ya ka ọ gbanwee ka ọ bụrụ onye na-agbachitere ịdọ aka ná ntị iji debe ndị na-agba ọsọ na Premier League.
N'ihi ya, ọ chụrụ ọtụtụ dribbling maka ọrụ achọghị ọdịmma onwe ya na ndị Hammers zere iweghachi. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Jarrod Bowen's Girlfriend?
Nwere ike ịhụ foto nwa anyị nwoke na nwanyị, ma o nwebeghị ihe o kwuru gbasara onye pụrụiche na ndụ ya. N'agbanyeghị nke ahụ, o toruola inwe enyi nwanyị.
Nke kachasị mkpa, ọ na-etinye azụmaahịa ya na njikọ nke ndị agbụrụ ya na-akwado ndị enyi nwanyị na kpakpando. N'ihi ya, ọ ga-abụ obere oge tupu ya ejide onwe ya.
Mmegharị ahụ Jarrod Bowen na-eme mgbe ị jụrụ banyere enyi ya nwanyị.
Ndụ ezinụlọ Jarrod Bowen:
Nwa anyi nwoke - dika umu mmadu nile - nke nwanyi muru. Ọ nwere nna nwere ụmụnne ya na ndị ikwu ya na nwanne ya.
A na-akpọ ha niile ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Jarrod Bowen. Ọzọkwa, anyị ga-akọwapụta eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya ebe a.
Banyere Jarrod Bowen Nna:
Sam bu papa ndi umuaka. Ọ bụkwa onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama. N'agbanyeghị Bowen ji ya kpọrọ ihe.
N'ajụjụ ọnụ onye na-egbu ihe na nso nso a - akpọ ya Harry Redknapp chọrọ ịbanye na papa m maka West Ham! - na-ekwu okwu banyere etu esi eme Sam na ndị na-abụghị ndị otu egwuregwu mere ka ọ gbapụta na radar nke West Ham mana ọ banyeghị aka.
N'ụzọ dị mma, Bowen na-ebi ndụ nrọ Sam na nna na-egwu egwuregwu nwere obi ụtọ ikiri ka ọ na-apụta na London Stadium.
Banyere Jarrod Bowen Nne:
Dị ka Sam, nne na-aga n'ihu nwere mmetụta dị ukwuu na ndụ nwata na ịrị elu. Ọ na-esonyere di ya iji nyochaa ọganihu nwa ha nwoke na East London wee hụ na ọ na-eme ka ọdịmma ezinụlọ nwee egwuregwu ahụ.
Adebayo Akinfenwa Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Jarrod Bowen ya na papa ya na mama ya.
Banyere ụmụnne nwanne Jarrod Bowen:
You ma na onye bekee na-aga n'ihu nwere nwanne akpọrọ Harry? Ọ nwekwara nwanne nwanyị ọ tọrọ nke aha ya ga-abụrịrị ihe ụtọ. Mụnne ga-enwe nnukwu obi ụtọ na ya na ihe niile ọ na-eme na East London.
Jarrod Bowen ya na ụmụnne ya - nwanne nwoke akpọ Harry na nwanne nwanyị.
Banyere ndị ezinụlọ Jarrod Bowen:
Ewezuga ndụ ezinụlọ nke nwoke Bekee, ọ nweghị ndekọ banyere nna nna ya. Dị ka ndị na-ege anyị ntị, anyị na-achọ ịmata ma nne na nna ochie Bocross bụ ndị amamihe bọọlụ dị ka ya.
Ndi umunne ya na umu nne ya huru egwuregwu a n'anya? Mgbe ahụ, ọ ga-enwerịrị nwa nwanne nna ya na-eme ebili mmiri n'akụkụ ya. Ikekwe ee ma ọ bụ mba. Enwere ọtụtụ ịmata ihe anyị chọrọ iju, n'agbanyeghị na anyị anaghị eme ọsọ ọsọ ịchọpụta ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Jarrod Bowen Ndụ Nke Onwe:
Mgbanwe dịka ha na-ekwu bụ mgbe niile, mana nwa anyị nwoke egosipụtara na ọ bụ otu. Bowen nwere - mmụọ - nwere amamihe - nọgidere bụrụ onye ọ bụ site n'oge ya na ọgbakọ ọgbakọ na-agba ọsọ.
Ọ dị umeala n'obi, gbadata n'ụwa ma nabata ya. Ọ na-ekwere na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'agbanyeghị ụgwọ, echiche na-egosipụta na ọrụ ya dị egwu.
You maara nke ahụ Jarrod Bowen dọkpụụrụ taya traktọ gafee otu ubi iji bulie elu iji nwee ihe ịga nke ọma dị ka ịga n'ihu? Nke a bụ otu ọdịnihu ga-esi nwee ihe ịga nke ọma na ọ ga-akwụsị na ihe ọ bụla ọ ga-adị n'elu egwuregwu ya.
Ọ bụ ezie na anyị ejidebeghị ya ka ọ na-ekpori ndụ n'èzí football, ọ na-eti anyị ihe dị ka onye hụrụ egwu n'anya. Igwu mmiri na iso ndị enyi na-emekọ ihe ga-abụ akụkụ nke ihe omume ntụrụndụ ya. Ọzọkwa, ezumike kwesịrị ịdị na ndepụta nke ọdịmma ya.
Ọ na-eme ka ndị enyi ya dị nso mgbe niile.
Ndụ Jarrod Bowen Ndụ:
Ihe na-aga n'ihu bụ ihe ọhụrụ maka bọọlụ elu-elu dika ụgbụ ya ruru 4 Nde Euro! Enweghi oke ihe ọ ga - eji ụgwọ ọnwa kwa afọ nke annual 5,000,000. Nke a na-akọwa ihe kpatara foto Instagram ya enweghị ụdị ndụ okomoko a na-ahụ maka ịgbagharị n'ụgbọ ala ndị mara mma ma na-anọ n'ụlọ nnukwu ụlọ.
Eziokwu nke Jarrod Bowen:
Iji mechie edemede a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, lee eziokwu ole na ole gbasara ya:
Eziokwu # 1- Salary and earnings per Seconds:
Kwa Afọ £ 5,000,000
kwa ọnwa £ 416,667
Kwa Izu £ 96,006
Kwa .bọchị £ 13,715
Kwa elekere £ 571
Kwa Nkeji £ 9.52
Sekọnd £ 0.16
Kemgbe ị malitere ilele Jarrod Bowen's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2- Okpukpe:
Ndị egwuregwu bọọlụ buru ibu n'idebe mama ha etu ha si ele ihe metụtara okwukwe anya. N’ihi ya, o siri ike ịmata ma hà bụ ndị kwere ekwe ma ọ bụ na ha abụghị. N'okwu Jarrod Bowen, anyị nwere ntụkwasị obi na ọ bụ onye kwere ekwe na yikarịrị ka ọ bụ Onye Kraịst.
Eziokwu # 3- FIFA 2020 Fim:
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịmara na FIFA nyere kpakpando dị ala nke enweghị ike ịkwụsị ọgụ. Yiri Joe Rondon, kedu ka anyị ga - esi mee ka eziokwu ahụ dịrị na ụdị ọdịdị dị ịtụnanya nwere ogo 77 naanị nke nwere ike 84?
Naanị ihe anaghị agbakwunye maka ndị ịgba egwu bọọlụ amaara maka ịchekwa klọb site na mbupụghachi.
Lelee stats nke kpakpando na-arị elu
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ banyere akụkọ akụkọ nwata na akụkọ ndụ nwata nke Jarrod Bowen. Anyị nwere olile anya na o sitere n'ike mmụọ nsọ kwenye na oge ndị kachasị njọ dị tupu chi ọbụbọ. Dị nnọọ ka Bowen chere na ya enwekwaghị olileanya niile ruo mgbe Hereford chetara ma nye ya nkwekọrịta na-agbanwe ndụ.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna na-aga n'ihu n'ihu ịkwado ọrụ ya. Okwukwe ha nwere na ya adaghị mbà, ọbụlagodi mgbe ọ dị ka Bowen enweghịzị ọdịnihu na bọl. Taa, ọ maara n'ụzọ doro anya itinye egwuregwu n’elu akwa na ndị ezinụlọ ya nwere obi ụtọ ịhụ ka ha na-akpọ ha Bekee Arjen Robben.
Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Maka azịza ọsọ ọsọ nye akwụkwọ nyocha Biographical gị, jiri tebụl anyị ka ọ na-achikota profaịlụ Jarrod Bowen.
Aha zuru ezu: Jarrod Bowen.
aha otutu: Ugochukwu
Age: Afọ 23, ọnwa 11.
Ụbọchị ọmụmụ: 20 nke December 1996.
Ebe amụrụ onye: obodo Leominster na Herefordshire, England.
Ogo n'ogo: 5 ụkwụ, 9 sentimita asatọ.
Elu na Cm: 175.26.
Egwuregwu Ọnọdụ: Kwatuo
Ndị nne na nna: Sam (nna).
Ụmụnne: Harry (nwanne nwoke), Nwata nwanyị.
Ihe omume: Na-ege ntị music. igwu mmiri ma soro ezigbo ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Ezigbo Net: 4 Nde Euro.